15 fanomezana tsy misy antony ho an'ny mpamorona sary mahafinaritra! | Famoronana an-tserasera
Mieritreritra hanome fanomezana ho an'ny mpiara-miasa ve ianao? Te hampiditra tena amin'ny Krismasy ve ianao? Raha izany dia androany aho mitondra safidy hafa mahaliana 15 izay hanampy anao hanapa-kevitra. Manoro hevitra ny hisafidy ireo fanomezana mahasoa sy azo ampiharina kokoa aho, heveriko manokana fa ny fitaovana miasa na zavatra iray hanamorana ny asantsika dia ankasitrahana kokoa noho ny zavatra haingon-trano tsotra fotsiny.
Miankina aminao izany, ny toetran'ny mpamorona ary ny teti-bola anananao. Izany no antony nanandramako nanangona hevitra samihafa amin'ny vidiny samihafa sy amin'ny fiasa samihafa. Ny sasany amin'ireo fanomezana ireo dia fitaovam-piasana, ny sasany kilalao sy kojakoja fialamboly fa izy rehetra ireo Tsara ry zareo!
Solosaina: Izy io dia ny kintana fanomezana ho an'ny mpamorona. Miankina amin'ny filan'ny asa sy ny saha izay natokana ho an'ny mpamorona, solosaina iray na iray hafa no atolotra kokoa. Amin'izay dia zava-dehibe ny ampahafantarinao tsara amin'ny tenanao ny tombontsoa atolotry ny safidy tsirairay avy ary mazava ho azy ny filan'ny namanao. Ny ekipa iray ihany dia tsy ho takiana raha manolo-tena amin'ny sehatry ny sary mihetsika isika, ny sehatry ny fanoharana na ny famolavolana tranonkala.
Takelaka sary: Raha tsy misy isalasalana dia fanomezana kintana iray hafa izy io ary tsy tokony ho diso avy amin'ny lisitray. Izy io angamba no iray amin'ireo fitaovana ilaina indrindra amin'ny fiasana eo alohan'ny solosaina. Imbetsaka izahay no nanome torohevitra mba hisafidy ny takelaka sary mety. Ao amin'ity lahatsoratra ity Hahita torohevitra vitsivitsy ianao izay azo antoka fa hanampy anao hisafidy takelaka mifanentana amin'ny filanao sy ny teti-bolanao.
Mihidy: Fitaovana mahaliana sy mahaliana novolavolain'i Wacom hahafahantsika misambotra ny sarisarinay noho ny penina manokana sy ny sensor-ny miendrika clamp. Ny zava-bitantsika dia ny mampivelatra ny sarisarantsika amin'ny fomba nentim-paharazana amin'ny fotoana anoratana azy ireo amin'ny fanohanana nomerika. Tsy isalasalana fa fomba iray hitsitsiana fotoana sy hanamorana ny asan'ny mpamorona.
iTap Charger: Carger elektrika misy adaptatera USB izay mirehitra isaky ny ampiasaina. Ireo mpamorona sary dia matetika voahodidin'ny karazana fitaovana elektronika isan-karazany, noho izany ity ohatra ity dia tsy handrakotra ny filàna sy ny fiasa sasantsasany fotsiny, fa hanao izany amin'ny fomba iray tany am-boalohany sy mahasarika ary mitaona fanahy.
Airtame: Indrindra ho an'ny olona miasa amin'ny sehatry ny audiovisual dia mety tena ilaina io zavatra io. Izy io dia mpampitohy HDMI izay manafaka ny sarin'ny monitor na ny efijery amin'ny televiziona na projector rehetra nefa tsy mila tariby. Tsara!
Bigshot: Mahafantatra olona manandrana ny dingana voalohany amin'ny tontolon'ny sary ve ianao? Manan-janaka ve ny namanao mpamorona? Ka ity fakantsary ity dia mety ho fanomezana mahaliana satria fakantsary fanandramana ary indrindra didactic izay manampy ny mpampiasa azy hahatakatra amin'ny fomba lalina sy azo ampiharina amin'ny fomba fiasan'ireto milina ireto. Manome ihany koa ny fahafaha-manangona sy manala azy io mba hahafantarantsika amin'ny fotoana rehetra ny vokatry ny singa tsirairay amin'ny sary.
TypeRider: Lalao video mahaliana sy mahaliana tokoa ny mianatra ny sehatry ny typografika mahafinaritra amin'ny fomba mahafinaritra. Tsy isalasalana fa fialamboly izay hahatonga ny namanao namorona ho mahatsikaiky indrindra ary hanampy azy ireo hamerina hijery ireo hevitra sy hahazo fahalalana vaovao.
Intuos Creative Stylus: Izy io dia penina nomerika tsy mampino ho an'ny takelaka sy iPad izay misy fividianana, fahaiza-manao ary endrika tsy mampino. Tsy misy isalasalana, fitaovana haingana be, haingana ary azo ampiharina amin'ny fampandrosoana ny kisarisary sy ny famolavolana endrika vaovao.
MeterPlug: Raha misy zavatra tsy isalasalana dia ny mpandrafitra sary no mandany ora maro isan'andro eo alohan'ny solosaina ary mampiasa milina sy fitaovana elektronika isan-karazany. Ity plug marani-tsaina ity dia ahafahana mampihena ny fanjifana angovo ary noho izany ny volavolan-dalàna momba ny herinaratra: fanomezana mahomby tanteraka ho an'ny mpamorona ary koa ho an'ny rehetra, hoy ny zava-drehetra. Iza no tsy te hitsitsy vola amin'ny volan'izy ireo?
Ny Cult of Lego: Izay boky mifandraika amin'ny tontolon'ny famoronana sy ny famoronana dia azo antoka fa horaisina tsara. Eto ianao dia manana ohatra amin'ity boky ity momba ny Lego, tsy misy isalasalana fa ny kilalao izay tena nitaona sy niaraka tamin'ny mpamorona sary tamin'ny taranaka maro nandritra ny fahazazany.
FontSpotting: Lalao karatra tsara indrindra hampiofanana amin'ny sehatry ny typography. Ity lalao ity dia manolotra ihany koa ny fahafaha misintona ireo endrika amina tranokala ofisialiny hamolavolana sy hanangonana doka manokana. Tena soso-kevitra!
Inkode: Kit tsara tarehy izay ahafahanao mamadika ireo sary sy sary nalaina tamin'ny findainao ho t-shirt sy akanjo tany am-boalohany. Mety ho an'ireo mpamorona rehetra izay sahy.
PixelRuler: Rehefa miasa amin'ny kisarisary isika dia azo inoana fa hiara-hiasa amin'izy ireo isika amin'ny alàlan'ny alàlan'ny solosaintsika sy ny lozisialy fanovana nomerika antsika. Ka io mpanapaka lehibe io dia mety ho tonga fitaovana ilaina satria voahodina amin'ny pixel izy. Amin'izany no ahafahantsika manao sary ny pejin-tranonkalantsika sy ny rindran-damina amin'ny efijery amin'ny tanana.
Moleskine Evernote Smart Notebook: Ity kahie ity dia natao hampiasaina toy ny Evernote sy ny iPad na ny iPhone. Izy io koa dia misy sticker adhesive maromaro hanasokajiana sy handaminana vaovao mahomby.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » 15 fanomezana tsy misy antony ho an'ny mpamorona sary mahafinaritra!
Tanya dia hoy izy:
Mieritreritra aho fa tsy nahita amigurumis ianao! Izy ireo dia saribakoly tenona tanana izay mety ho endrika manokana.
Valio i Tanya